အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ Ejector Pin? အကောင်းဆုံး Ejector Pin အရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ ဖြန့်ဝေသူနှင့်စက်ရုံမှရှာဖွေရန်။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကျော်ကြားသောအမည်များတစ်ခုဖြစ်တယ် Taiwan ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူတစ်ဦးပြည့်စုံသည့်အကွာအဝေး Ejector Pin သော sturdily သူတို့ရဲ့သယ်ဆောင်များအတွက်ဆောက်လုပ်တန်ဖိုးထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျနော်တို့အရွယ်အစားနှင့်ဖောက်သည် '' အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုနှုန်းအဖြစ်စိတ်ကြိုက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ gradations နှင့်အတူထိုထုတ်ကုန်ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးနိုင်ငံတကာစျေးကွက်အနှံ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုပြန့်ပွားခြင်းဖြင့်မြင့်မားသောဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းဦးဆောင်ဈေးနှုန်းများမှာ availed နိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - TD2
Die Casting မှိုများအတွက် Ejector Pin
ejector pin သည်ထုတ်ကုန်မှိုမှထုတ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုရည်ညွှန်းသည်.
တွန်းတံကိုထုတ်လိုက်သောအခါ,ဖိအားဖိစီးမှုကြောင့်ကျိုးခြင်းသို့မဟုတ်ကွေးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်.ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကိုကာကွယ်ဖို့,တွန်းတံသည်လုံလောက်သော compressive strength နှင့် bending strength ရှိရန်လိုအပ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/ejector-pin.html
အကောင်းဆုံး Ejector Pin ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Ejector Pin မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ